ဂျန်နာရာ သည် တောင်ကိုရီးယားအဆိုတော်နှင့် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီး တောင်ကိုရီးယားနှင့် တရုတ်အနုပညာလောက၌ ထင်ရှားသည်။ သူ့သီချင်း အိပ်မက်လှလှ ကြောင့် လူသိများသည်။ New Nonstop, Successful Story ofaBright Girl, Bratty Princess, Baby Faced Beauty, School 2013, My Love Patzzi, Fated to Love You နှင့် I Remember You စသော ဇာတ်လမ်းများကြောင့်လည်း လူသိများလေသည်။
ဂျန်သည် သူ၏ငယ်စဉ်ဘဝအချိန်အများစုကို တောင်ကိုရီးယား၊ ဆိုးလ်မြို့ရှိ ယွတ်ချွန်းဒုံ အွန်ပြောင်းခရိုင်မွေးရပ်မြေ၌သာ ကုန်လွန်ခဲ့သည်။ မူလတန်းကျောင်းနေစဉ်က Les Misérables ဟူသော ပြဇာတ်၌ သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သော သူ့အဖေ ဂျုဟျိုစုံနှင့်အတူ ကပြဖူးရာ နောင်သော် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာရေး ဝါသနာအတွက် မျိုးစေ့ချခဲ့မိခြင်းဟု ဆိုနိုင်သည်။ မတ် ၂၀၀၀ ၌ ချောင်အန်း တက္ကသိုလ်၊ သရုပ်ဆောင်မေဂျာမယူမီ အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝမှာပင် ရုပ်သံကြော်ငြာများအတွက် ကြော်ငြာမော်ဒယ် လုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ နောက် ၁၀ နှစ်အကြာ ၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၀ ၌ ဘွဲ့ရသည်။ တက္ကသိုလ် တက်ပြီးကတည်းက နှောင့်နှေးမှုများ ဖြစ်ခဲ့ရသည်မှာ အလုပ်များ အဆက်မပြတ် လုပ်နေရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်၌လည်း ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်းက ပေးသောဆု ရခဲ့သေးသည်။
ဂျန်သည် ၂၀၀၂ မေ၌ အဆိုတော်အဖြစ်နှင့် ဖျော်ဖြေရေးကမ္ဘာအေဂျင်စီမှ ပွဲဦးထွက်လာသည်။ အက်စ်အမ် ဖျော်ဖြေရေးနှင့် စာချုပ်ချုပ်ပြီး အဆိုတော်ပေါက်စအဖြစ် သူ၏ အနုပညာခရီးကို စခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အက်စ်ဖျော်ဖြေရေးမှ အခြားအနုပညာရှင်များထက် လူကြိုက်နည်းလိမ့်မည်ဟူသော ခန့်မှန်းချက်ဖြင့် သူ့ကို ဖြုတ်ခဲ့သည်။. အက်စ်အမ်စီမံခန့်ခွဲရေးမှ မည်သို့ပင် ထင်မြင်နေပစေ၊ ဂျန်သည် ငါ့မျက်ရည်တွေ သင်္ချိုင်းဖြစ်ဟူသော သီချင်းဖြင့် ပထမဆုံးဇာတ်လမ်း ဟူသော ပွဲဦးထွက် အယ်လ်ဘမ်ကို ဖြန့်ချိလိုက်သည်။ အစကနဦး၌ သိပ်လက်မခံကြရကား ကိုရီးယားတေးဂီတဇယား၌ နံပါတ် ၁၂ သာ ချိတ်လေ၏။ လူသိများသော ပွဲဦးထွက်သူများ sitcom New Nonstop ၌ ပါဝင်ပြီးနောက် ကျော်ကြားလာပြီးလျှင် အခြားသီချင်းများ Confession နှင့် April Story တို့ကဲ့သို့သော အယ်လ်ဘမ်များကို ဆက်တိုက်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် တေးဂီတဇယားအမျိုးမျိုးတို့၌ ဘုတ်ထိပ်စွဲလေတော့သည်။ အယ်လ်ဘမ်သည် ကော်ပီပေါင်း သုံးသိန်း ရောင်းချရ၏။ သို့ဖြစ်၍ ဂျန်သည် အမ်ဘီစီ၏ တေးဂီတရှိုး၌ ပင်တိုင်တက်ဆက်သူအလုပ်ကို ဆက်လက်တည်မြဲစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်လေသည်။ ကေဘီအက်စ် ဆွေးနွေးပွဲ အချစ်ဇာတ်လမ်း၌လည်း ပင်တိုင်တင်ဆက်သူ လုပ်သည်။ ၂၀၀၁ အကုန်၌ နှစ်ကုန် တေးဂီတဆုပေးပွဲ၌ လူသစ်အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်ဆုကိုလည်းကောင်း၊ ဖျော်ဖြေရေးဆုပေးပွဲ၌ လူသစ်တင်ဆက်သူဆုကိုလည်း ရရှိလေသည်။
၂၀၀၂ အောက်တိုဘာ၌ ဒုတိယအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော Jjang Nara Vol.2 Sweet Dream ကို ဖြန့်ချိသည်။ အိပ်မက်လှလှ သီချင်းသည် ချက်ချင်းပေါက်သွားပြီး ကိုရီးယားတေးဂီတဇယား၌ နံပါတ်တစ် တန်းချိတ်လေသည်။. ၎င်းအယ်လ်ဘမ်သည်လည်း ထိုနှစ်အတွက် တောင်ကိုရီးယား၌ အရောင်းရဆုံး အယ်လ်ဘမ်များထဲမှ တခု ဖြစ်လာသည်။ ထိုသီချင်းကို သူ၏ ၂၀၀၂ ဇာတ်လမ်းဖြစ်သော My Love Patzzi ၌ ဇာတ်ဝင်တေးအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ သူ၏ အတောမသတ် ကျော်ကြားမှုကြောင့် အမ်ဘီစီ ဂီတပွဲတော်နှင့် ကေဘီအက်စ် ဂီတဆုပေးပွဲ၌ ဒေဆန်ဆုနှစ်ဆု သို့မဟုတ် ဂရင်းဆုတနှစ်တာကိုရီးယားထိပ်တန်းအနုပညာရှင်နှင့် ညီပါဝင်သော ဆုပေါင်းမြောက်များစွာကို ရရှိခဲ့လေသည်။ ၂၀၀၃ ၌ တရုတ်စီစီတီဗီ-အမ်တီဗီ ဆုပေးပွဲ၌ တနှစ်တာကိုရီးယားအဆိုတော်ဆုကို ရပြန်သည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၃ ၌ တတိယအယ်လ်ဘမ် 3rd Story ကို ထုတ်ရာ ပေါက်ပြန်ရာ နံပါတ်တစ်ချိတ်သော်လည်း သူ၏ ဒုတိယအယ်လ်ဘမ်ကို မကျော်ဖြတ်နိုင်သည့်အပြင် မမီပေ။
၂၀၀၄ ၌ ယခင်အယ်လ်ဘမ်သုံးခုမှ ပေါက်သီချင်းများကို စုစည်းပြီး အယ်လ်ဘမ်တခု ထုတ်ပြန်သည်။ ၎င်းနောက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၄ ၌ I Love School နှင့် Winter Diary ပါသော ငါ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းဟူသော လေးခုမြောက် အယ်လ်ဘမ်ကို ဖြန့်သည်။
တရုတ်ပြည်၌ သူ့ကို လူကြိုက်များမှုက တရုတ်ဗားရှင်း အယ်လ်ဘမ်များ ထုတ်ဖြစ်ခြင်းဖြင့် တရုတ်၌လည်း နယ်ပယ်တခု ရရှိခဲ့သည်။ သူ့ပထမဆုံးတရုတ်အယ်လ်ဘမ်သည် တရှိန်ထိုးအောင်မြင်ပြီး ယခင်ဖြန့်ချိပြီးသော ကိုရီးယားသီချင်းများကို တရုတ်လိုဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အိပ်မက်လှလှ ၊ Its Probably Loveအချစ်ပဲနဲ့တူတယ်၊ Im A Woman Tooကျမလည်းမိန်းမသား တို့၏တရုတ်ဗားရှင်းသည် အာရှတဝန်း ရေဒီယိုများ၌ အထူးလူကြိုက်များလေသည်။ ကိုရီးယားနှင့် တရုတ်သီချင်း နှစ်မျိုးလုံး ဆိုရလေ့ရှိသော တရုတ်ပြည်အနှံ့ တေးဂီတဝိုင်းများ၌လည်း ဖျော်ဖြေရသည်။ ၂၀၀၆ ၌ ဒုတိယတရုတ်အယ်လ်ဘမ် ကွန်ဖူးကို ဖြန့်သည်။
၂၀၀၇ ၌ ကိုရီးယား ပေါ့လောကသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီး၊ ပဉ္စမမြောက်အယ်လ်ဘမ် သူမ ကို ဖြန့်ချိပြီးနောက်တနှစ်တွင် အာရှအိပ်မက်ဟူသော နှစ်ဘာသာအယ်လ်ဘမ်ကို ဖြန့်သည်။
၂၀၀၈ ပေကျင်းနွေရာသီအိုလံပစ်အတွင်း၊ ၂၀၀၈ အိုလံပစ်သီချင်းဖြစ်သော ပေကျင်းက မင်းကို ကြိုဆိုတယ်၌ ပါဝင်သီဆိုရာ တရုတ်စကားမပြောသောနိုင်ငံမှ တဦးတည်းသော အဆိုရှင်ဖြစ်လေသည်။
ဂျန်သည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေး မိုးနှင့်သမုဒ္ဒရာ ၊ ရုပ်သံရှိုးများအတွက် ဒုံရီ နှင့် ကလေးရုပ်အလှ စသည့် သံစဉ်များကိုလည်း ဆိုပေးခဲ့သည်။ ကိုရီးယားအန်နီမဲရုပ်ရှင်များ၌လည်း အသံသရုပ်ဆောင်သည်။
အာရှအိပ်မက်ကို ထုတ်ပြီး လေးနှစ်အကြာ ၂၀၁၂ ၌ ငါမင်းကိုပဲသတိရနေဟူသော ဒီဂျစ်တယ်ဆင်ဂဲလ်ဖြင့် တဖန် ဝင်ရောက်လာသည်။
ဂျန်သည် အောင်မြင်သော သရုပ်ဆောင်ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်း ဖြစ်သည်။ အမ်ဘီစီရုပ်သံ၏ ကျော်ကြားသော sitcom New Nonstop ၌ ဦးစွာ ပါဝင်လိုက်ရာ၌ သူ၏ မျက်နှာချောချောလှလှလေးကြောင့် အကြီးအကျယ် ပေါက်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
၂၀၀၂ ၌ ဂျန်ပထမဦးဆုံး ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ရသော ဇာတ်လမ်းမှာ အက်စ်ဘီအက်စ်၏ Successful Story ofaBright Girl 명랑소녀 성공기 ဖြစ်ပြီး ဂျန်ဟွပ်နှင့် တွဲရသည်။ ၎င်းဇာတ်လမ်းကို ကောင်းစွာ လက်ခံကြပြီး ပရိသတ်ကြည့်ရှုနှုန်း မြင့်မားသည်။ ၂၀၀၃ ပေဆန် အနုပညာဆုပေးပွဲ၌ ၎င်းဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် မျက်နှာသစ်ရုပ်သံမင်းသမီးဆုကို ရရှိသည်။ ရုပ်သံနှင့် ပေါက်သီချင်း ချိုမြိန်သောအိပ်မက်တို့ကြောင့် ထိုနှစ်တွင် တောင်ကိုရီးယား၏ ကြယ်ပွင့်အဖြစ် ထွန်းတောက်လာခဲ့သည်။ ရုပ်သံနှင့် ပရင့်ကြော်ငြာများအတွက် သူ့ထောက်ခံကြော်ငြာပေးမှုများကို ပြလုပ်ရန်၊ ရုပ်သံရှိုးများနှင့် ရုပ်ရှင်များအတွက် ကမ်းလှမ်းမှုများစွာ လက်ခံရခြင်းတို့ကြောင့် အလုပ်အများဆုံးနှင့် ကိုရီးယားအမျိုးသမီးအနုပညာရှင်များအကြား အရှာဖွေခံရဆုံး သူတဦးဖြစ်လာသည်။
၂၀၀၅ ၌ တရုတ်ပြည်တွင် သူ့ကို လူကြိုက်များသောကြောင့် Bratty Princess 刁蛮公主 ၌ ပထမဆုံး သရုပ်ဆောင်ကြည့်လေရာ၊ တရုတ်စကားပြောပရိသတ်များ ချစ်ခင်မှုကို ရရှိပြီး၊ တရုတ်ပြည်နှင့်တကွ အခြား တရုတ်စကားပြောနိုင်ငံများ၌ ထင်ရှားလေသည်။ ထိုဇာတ်လမ်းတွဲအောင်မြင်မှုက ဂျန်ကို တရုတ်၌ hallyu ခေါ် ကိုရီးယားလှိုင်းကြယ်ပွင့်အဖြစ် ရောက်ရှိစေပြီးလျှင် တရုတ်၌ အခြားဇာတ်လမ်းတွဲများစွာ၌လည်း ပါဝင်ရလေသည်။
ဟယ်လိုမွန်းစတားဇာတ်လမ်းတွဲ၌ ပတ်ဘိုဂွံနှင့်အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် နှစ်များတွင်ကား ဂျန်သည် တရုတ်ပြည်နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံကို အိမ်ဦးနှင့်ကြမ်းပြင် သွားလာ၍ အဆိုတော်လုပ်သည်များ သရုပ်ဆောင်သည်များကို အကျဉ်းရုံး၍ သိရသည်။ ဆုပေါင်းများစွာကိုလည်း ရရှိသည်ဖြစ်ရာ ရုပ်သံစာရင်းများနှင့် သီချင်းစာရင်းများကို အောက်ပါ ဇယားတို့၌ ကြည့်ရှုနိုင်လေသည်။
၂၀၀၉ အောက်တိုဘာ၌ ဂျန်နာရာသည် တောင်ကိုရီးယားရှိ ဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်၌ မိမိ၏ ရုပ်ရှင်သစ်အကြောင်း ပြောကြစဉ် ရန်ပုံငွေကိစ္စကြောင့် တရုတ်ပြည်သို့ သုံးလေးခေါက်သွားပြီး လှုပ်ရှားခဲ့ရသည်ကို နောက်ခံပိတ်ကား၌ စာတန်းထိုးလိုက်သည်မှာ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ပြဿနာရှိတိုင်း တရုတ်ပြည်သွားတာပဲ ဟု ဖြစ်လေသည်။ နောက်ပိုင်း၌ ထိုမြင်ကွင်းကို တရုတ်အင်တာနက်သုံးစွဲသူတဦးမှ အင်တာနက်ပေါ်သို့ တင်လိုက်လေရာ၊ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ပြဿနာရှိတိုင်း တရုတ်ပြည်သွားတာပဲ ဟူသော စကားသည် ဂျန်နာရာကိုယ်တိုင် ပြောသည်ဟု ထင်သွားကြပြီးလျှင်၊ ထိုစကား ထပ်ကားသွားသည်မှာ ပိုက်ဆံပြတ်တိုင်းတရုတ်ပြည်သွား၍သရုပ်ဆောင်ရသည် ၊ ပိုက်ဆံမရှိသည်နှင့်တရုတ်လာရသည် ဟု ဖြစ်သွားသည်။ ၎င်းသည် သတင်းများ၌ ပါလာရာ၊ တရုတ်ပြည်ပရိသတ်များ၏ မကောင်းမြင်ခံရလေသည်။ ထိုမှတဆင့် တရုတ်အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်း၌ ကျင်လည်နေသော အခြား ကိုရီးယားအနုပညာရှင်များသို့ပါ ရိုက်ခတ်သွားတော့ရာ၊ ပေကျင်းရှိ ဂျန်၏အေဂျင်စီမှ ကိုယ်စားတောင်းပန်ရသည်မှာ ထိုစကားသည် နောက်ပြောင်ခြင်း သာဖြစ်သည်၊ တရုတ်ပြည်၌ သရုပ်ဆောင်ခြင်းက နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ဖြေရှင်းလိုက်မှ ပရိသတ်၏ ပိုမိုပြင်းထန်သော ဝေဖန်မှုကို ကြုံရသည်။
၎င်းနောက် ဂျန်နာရာသည် ပေါ်ခဲ့ အင်တာနက် မီဒီယာမှတဆင့် အလေးအနက် ပြောကြားသည်မှာ
5. အလှူအတန်းနှင့် အခြားလှုပ်ရှားမှုများ
ဂျန်သည် ငတ်မွတ်နေသော မြောက်ကိုရီးယားကလေးငယ်များသို့ နို့မှုန့်များ အခမဲ့ ပေးပို့ခြင်းကဲ့သို့သော လှူဒါန်းမှုအများအပြား ပြုခဲ့သည်။ the FHI Charity organization အဖွဲ့၌လည်း အလုပ်လုပ်သည်။
၂၀၀၇ တရုတ်ပြည်၌ ဂျန်သည် လူကေးမီးယားသွေးကင်ဆာရောဂါသည်ကလေးငယ်များအတွက် ရန်ပုံငွေတီးဝိုင်းကို ကျင်းပခဲ့သည်။ ၁၅ နှစ်မြောက် တရုတ်နှင့် တောင်ကိုရီးယားသံတမန်ဆက်ဆံရေးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျင်းပသော ပေကျင်းရှိ ဇွန် ၉ ဖျော်ဖြေပွဲ၌ သူနှင့် ဖန်အသင်း တွေ့ဆုံပွဲမှ ရရှိသော ပိုက်ဆံများဖြင့် ဂျန်ဖောင်ဒေးရှင်း ကို တည်ထောင်သည်။ ဖျော်ဖြေပွဲ လက်မှတ် ၁၂၀၀ လုံး စောလျင်စွာ ရောင်းကုန်သွားသည်။ ဖျော်ဖြေပွဲအပြီး စင်ပေါ်၌ တရုတ် လှူဒါန်းရေးအဖွဲ့က ဂျန်ကို နှလုံးသားလှသံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ပြီး၊ ဂျန်သည် ထိုသို့ဂုဏ်ပြုခံရသည့် ပထမဆုံးသော နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်လာသည်။
၂၀၀၈ စီချွမ်ငလျင်လှုပ်ပြီးသော်၊ အလှူခံအဖွဲ့များသို့ ဒေါ်လာ တသိန်းခွဲ လှူဒါန်းပြီးလျှင်၊ ဒုက္ခသည်များအတွက် ဂျန် အလှူခံရာ အဝတ်အထည်ပေါင်း ၈ ဘီလီယံ ရရှိသည်။
ဇွန် ၂၀၁၀ ၌ ဂျန်သည် ပေကျင်း ဟွာကျာတက္ကသိုလ်၌ ဆက်ဆံရေးပါမောက္ခအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသည်။
၂၀၁၁ ၌ ဆိုးလ်၊ ဂန်နမ်ဂု ဧရိယာ၌ ခရီးသွားပိုမိုလာစေရန် သံအမတ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။